Izikhathalogi Zezimoto Ezilungiselelwe
Ikhathalogi Of Geared Motors
Thola ikhathalogi yohlobo lwe-helical gear motors inline shaft hlobo
R uchungechunge ukubalwa kwezimoto nama-gearbox we-pdf
Lo ngumhlahlandlela webhokisi lamagiya nokukhethwa kwezimoto kulabo abangajwayele ngokugcwele ukukhetha. amabhokisi amakhulu wamagiya nama-motors ayinsimbi eyakhiwe, i-aluminium yonke eminye.
Ngomklamo kagesi nowemishini ekunciphiseni okukodwa & okuphindwe kabili
Ngokukhetha kahle isinciphisi segiya noma imoto elungiselelwe, Izilinganiso ze-torque ephezulu, izilinganiso zamagiya ekuqhubekeni okusondele, izinketho eziningi zokufaka, ndawonye.
Ama-motors ejwayelekile e-IEC ane-brake, VFD njll.
Ikhasimende lingakhetha zonke izinhlobo zamakhanda egiya ahambisana nemoto ngayinye. I-torque ehlukahlukene yokuhlanganiswa kusuka ku-motor naku-gearbox., Udlulisela kahle amandla kusuka kumoto kuya kuzicelo futhi ufaka ezinhlobonhlobo zezimboni, amathuluzi womshini we-inclu.
Thola ikhathalogi yochungechunge lwe-helical worm gearmotor s
Amayunithi egiya lama-helical-worm gear
Uchungechunge olungakwesokudla, i-worm gear motor ingafakwa kalula kuzicelo eziqinile. Amandla emoto kusuka ku-0.04 HP kuye ku-157.37 HP. ngenhlanganisela ye-helical / helical-worm, ngakho-ke isebenza kahle kakhulu kuneyunithi yegiya le-helical-worm ejwayelekile.
Amayunithi wegiya ahambisana nama-motors adingekayo
Amandla amayunithi we-helical-worm gear awabo. Isebenza kahle kakhulu kuneyunithi yegiya le-worm ebonakalayo ngenxa yokuhlanganiswa kwe-helical-worm. Ukudluliswa kwamandla okuhambisanayo kwenza amayunithi wamagiya we-helical-worm athule ikakhulu icwecwe kodwa eliphakeme.
Lapha Imiyalelo Yomhlangano Nesebenzayo
Yenza lula ukukhethwa komkhiqizo, Kunokuboniswa okuvela kuSogears kanye nokucaciswa kusihlu se-nameplate. umhlahlandlela wokukhethwa kwezimoto olungiselelwe kanye nencwajana yokulungiswa kwegiya. gearbox ikhathalogi pdf.
Thola ikhathalogu yama-motical helvel beared
Ama-Helical bevel aqondiswe emotweni anezinto eziningi ezithwele umthwalo
Lolu uhlobo lwe-engeli engakwesokudla ye-helical bevel geared motor enobukhulu obufanayo bokuthunga i-helical bevel geared motor kukhathalogi yayo, kusuka ohlotsheni lwe-gearing motors.
Ama-Helical bevel gear motors aqinisekisa ukusebenza okuphezulu kakhulu ikakhulukazi
Indlu yegiya ehlanganisiwe neyakhiwe kahle yamagiya wentsimbi eyi-helical iyazihlukanisa ngokwenziwa ngomshini kuzo zonke izinhlangothi. Helical, shaft parallel, wotho, helical worm futhi worm izinjini.
Amayunithi we-Helical-bevel gear anikela ngezinga eliphakeme lokusebenza okungaphezulu kwama-90%
Izindlu ezihlanganisiwe nezilungiselelwe kahle zamagiya wentsimbi eyi-helical ziyazihlukanisa ngokwenziwa ngomshini kuzo zonke izinhlangothi. Ama-Servomotors Avumelanisiwe Ane-Unical-Bevel Gear Units.
Thola ikhathalogi yama-motors afanayo ahlanganisiwe
Thola kalula i-parallel-shaft gear-motor yakho
Imoto etholiwe kusuka kwaNord Drivesystems zilungele ukusetshenziswa kuma-intralogistics kanye nakudlulisa impahla ngobuningi kanye nasembonini yokudla. Inikeza ukukhethwa okubanzi kwama-Parallel Shaft Geared Motors.
Shaft Parallel efakwe ama-motors afakiwe akhiqizwe yi-Power Build
Ama-gearmotors we-shaft afanayo ayatholakala kusuka esitokisini kukho konke ukwakheka kwe-AC ne-DC. Shaft egibele futhi flange enamathela parallel gearmotors helical. I-Corporation inikeza ukukhethwa okubanzi kwamaParallel Shaft Geared Motors.
Ikhathalogi yokuhlwaya yegiya yokulinganisa kanye nokwesokunxele
Ingxenye ethile yezimboni. Thayipha. Extruders, Okufanayo ama-shaft gear reducers nama-gearmotors. Helical parallel shaft gear motor ubukhulu bufana nokuthi SEW. Pama-arallel shaft gearmotors ayatholakala kusuka esitokisini kukho konke ukwakheka kwe-AC ne-DC.
Thola ikhathalogi yama-cycloidal gear minimers
Isimiso sokushayela sePlanet cycloidal pin gear minimer
I-Cycloid Drayivu idizayini eyingqayizivele yegiya le-cycloid inezinzuzo eziphakeme kunezinciphisi zejubane ezisebenzisa amagiya amazinyo ajwayelekile. IDrayivu iyakwazi ukumelana nomthwalo oshaqisayo wezikhathi ezithile kuze kufike ku-500% wesilinganiso sayo se-torque yekhathalogi.
Omunye wabakhiqizi abasebenza kangcono be-cycloidal gear reducer
Uchungechunge lwe-WB Micro Cycloidal Pinwheel Reducer Gearbox Gear Motor: inesigaba esisodwa se-cyclo drive gear reducer, isiteji esiphindwe kabili se-cycloidal gear reducer. Ikhathalogi ye-China Cycloidal Gear Reducer
Ama-cycloidal ejubane anciphisa ahlinzeka ngokunemba okuphezulu kakhulu okunikezwayo
Gxila entengweni yesabelomali sokudlulisa amandla ngegiya lekhwalithi ephezulu. Idizayini ye-cycloidal disc ivumela izingxenye zokunciphisa ukuthi zisebenze ngokushelela. Ukukhetha okukhulu kwama-gearbox wama-robotic-backlash, amabhokisi wamabhokisi we-servo aphezulu.
Thola ikhathalogi ye-NMRV worm gear minimator
Ama-gear wehlisi we-Worm gear ne-Worm geared motors
I-Worm Gear Reducer Ehlanganisiwe Izinciphisi ze-NMRV ne-NMRVpower worm gear njengamanje zimelela isisombululo esithuthuke kakhulu sezidingo zemakethe ngokusebenza kahle nokuguquguquka.
I-NMRV ne-NMRVpower worm gearators
Uchungechunge olusha lwe-NMRVpower, olutholakala futhi njenge-com- comal integral helical / worm option, lwenzelwe ukuqinisekisa ukuthi kusezingeni eliphezulu. Izinciphisi zamagiya wesibungu, kuhlangene futhi kuniyunithi yokunciphisa ngaphambi kwesigaba
I-Motovario NMRV kanye ne-NMRV PAND worm gear minimers
Amayunithi wamagiya we-TNRV series worm isizukulwane esisha somkhiqizo esakhiwe inkampani yethu ngesisekelo sokuphelelisa imikhiqizo yochungechunge lwe-WJ. Ukusebenza okunikezwe kukhathalogi kufana nokuma kokuma kwe-B3 noma okufanayo.